Sandals Beaches uye Resorts: Bhuka uye kufamba uine chivimbo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Caribbean » Sandals Beaches uye Resorts: Bhuka uye kufamba uine chivimbo
Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau • Bahamas Kuputsa Nhau • Bharabhasi Kuputsa Nhau • Kuvhuna Grenada Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Jamaica Nhau • Kuvhuna Saint Lucia Nhau • Caribbean • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • Vanodanana Michato Honeymoons • Shopping • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau
Sandals Beaches uye Resorts inofara kuenderera mberi nekuita kuti kufamba kuve kwakachengeteka uye kusagadzikana-kusagadzikana sezvinobvira kune vashanyi nekuwedzera kweCancellation Kudzivirirwa Kubatsirwa uye Yekufamba Dziviriro Chirongwa - Inishuwarenzi Iri Patiri kuburikidza naFebruary 28, 2021, uku ichipawo kubvumirana COVID-19 kuyedza kune vese vakanyoreswa vashanyi pa-resort vasati vaenda. Nezvinhu izvi zvekuwedzera, iyo Luxury Inosanganisirwa® nzvimbo kambani iri kupa vatengi zvakatowanda zvikonzero zveku Bhuka uine Ruvimbo.
"Ticharamba tichienda kunzvimbo refu kuti tione kuti vashanyi vedu vane rugare rwepfungwa kana zvasvika kuzororo nesu kuSandals uye Beaches Resorts," akadaro Adam Stewart, Executive Chairman weSandals Resorts International.
Kufamba Kudzivirirwa Chirongwa - Inishuwarenzi Iri Patiri
Kupa vaenzi kunyangwe kudzivirirwa, Sandals® neBeaches® Resorts vakawedzera yavo Yekuchengetedza Dziviriro Chirongwa - Inishuwarenzi Iri Patiri inofambiswa neTrip Mate ™ iyo inotengwa panzvimbo yevaenzi. Zano iri rinopa vafambi kunyorera ikozvino kusvika Kukadzi 28, 2021, yekufamba ikozvino kusvika Nyamavhuvhu 31, 2021, yakawedzera mabhenefiti ekurapa panguva yavo yekugara. NeChirongwa Chekudzivirira Kwekufamba, vashanyi vanovharwa kuti vawedzere kugara kwavo kunzvimbo yekuisa vanhu kwavo uye kuti vagamuchire chero kurapwa kunodiwa kweanosvika gumi nemana husiku pasina muripo wakawedzerwa. Kuwedzera mabhenefiti ehurongwa anosanganisira kufukidzwa kwemubhadharo wekurapa uye mabhenefiti mazhinji kusvika $ 14 pamushanyi.
Kubva ikozvino kusvika Kukadzi 28, 2021, vashanyi vanobhuka Luxury Inosanganisira® Zororo yekufambisa izvozvi kusvika Nyamavhuvhu 31, 2021, vanozove zvakare nerubatsiro rwakawedzerwa rwekuziva kuti vanogona kukanzura zororo ravo mazuva makumi matatu nemasere vasati vasvika uye vanogashira mari yakazara pa nyika chikamu chezororo ravo nemazirango zero. Vashanyi vanorega mazuva makumi matatu nemashanu vasati vasvika vanogashira mubatanidzwa wemakumi mashanu muzana ekudzoserwa uye 31 muzana chitupa chekufamba cherwendo rwemberi kune chero Sandals kana Beaches Resort mukati memwedzi gumi nemaviri. Vafambi vane zvakare sarudzo yekudzima mukati memazuva gumi nemana uye kusvika pazuva rekusvika gwaro rekufambisa rinoshanda kwemwedzi gumi nemaviri kubva pazuva rekutanga rekufamba.
* Iyi bhenefiti inopihwa neUnique Vacations Inc. uye haisi iyo inishuwarenzi kubatsirwa.
Kwayedza COVID-19 Kwayedza
Sandals uye Mahombekombe Mahotera ari kuita zvese zvinobvira kupa yakachengeteka, isina musono uye isina kushushikana-ruzivo kuitira kuti vashanyi varambe vachibhuka yavo Luxury Inosanganisira® Zororo vane chivimbo chakazara. Centers for Disease Control (CDC) nguva pfupi yadarika yakazivisa chinodiwa kune vafambi vekunze kuti vape bvunzo dzisina kunaka dzeCOVID-19 vasati vadzokera kuUnited States, Canada neUK. Tichifunga nezve izvi zvinodiwa, vese maSandals nemaBeach Resorts vashanyi vanogashira yekuyemura COVID-19 antigen kuyedzwa kwevagari vemuUS uye PCR kuyedza kweCanada neUK vagari kubva kunyaradzo yeiyo resort. Yese bvunzo ichaitiswa nevakatenderwa vezvekurapa vane yakanyanya mukana wevashanyi mupfungwa uye nekukanganisa kushoma kune yavo yakazara zororo ruzivo. Kana muenzi akaedzwa akafunga nezve COVID-19 vasati vaenda, nzvimbo dzekutandarira dzinogadzirirwa zvizere nezviteshi zvekurapa zvinoshanda zuva nezuva nemukoti akanyoreswa uye 24/7 vanoshevedza varapi vekurapa.
Iyo Cancellation Dziviriro Bhenefiti, Yekufamba Yekudzivirira Chirongwa uye yekubvuma kweECVID-19 kuyedza, pamwe neiyo Sandals Platinum Maprotocol eUtsanana uye Mahombekombe ePlatinamu Maprotocol eUtsanana, inobvumira vafambi kutizira kuCaribbean nerutendo rwavave kutarisira.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve maBhuku uye Kufamba Nechivimbo, shanya:
Kuti udzidze zvakawanda nezve Rwendo rweKuchengetedza Rwekufambisa - Inishuwarenzi Iri Patiri, shanyira: